लकडाउनले आदित्यको हालत विग्रियो, भन्छन्, ‘मेरो खातामा १५ हजार रुपैया मात्र छ भन्ने सुनेर मेरो हुनेवाला ससुरालीले के सोच्दैहोलान् ?’ « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:२१
काठमाडौ । प्रख्यात गायक आदित्य नारायण अहिले विवाहको चर्चाका कारण मिडियामा छाइरहेका छन् । उनी प्रेमिका श्वेता अग्रवालसँग बिहेको तयारीमा रहेको बताइएको छ । आदित्यले प्रेमिकासंगको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तै अवस्थामा आएको एउटा समाचारले भने उनी दु’खी भएका छन् । लकडाउनका कारण आदित्य टा’ट प’ल्टि’एको र उनको बैंकमा १५ हजार रुपैया मात्र बाँकी रहेको समाचार अहिले भारतीय मिडियामा आएका छन् । यो उनले दिएको अन्तरवार्तालाई लिएर समाचार बनाइएको हो ।
मिडियामा आएको त्यस्तो समाचारको खण्डन गर्दै आदित्यले आफुले भनेको कुरालाई मिडियाले गलत ढंगले ब्याख्या गरेको बताएका छन् । उनले एउटा बैंकमा रहेको ५ लाख रुपैया लकडाउनको क्रममा सकिएको । १५ हजार बाँकी रहेको भन्दै दिएको अन्तरवार्तालाई टा’ट प’ल्टि’एको भनेर ब्याख्या गरिएको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
एउटा अन्तर्वार्तामा आदित्यलाई उद्धृत गर्दै भनिएको थियो कि लकडाउनका कारण उनले काम पाएका छैनन् र यो खराब चरणमा उनी टा’ट प’ल्टि’एका छन। समाचारमा यो पनि दावी गरिएको थियो कि उनले लकडाउनको बेला म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको बचत र पैसा फिर्ता लिएका थिए।
अब अर्को वेबसाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा, आदित्यले आफ्नो बचत समाप्त भएको समाचारमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले भने, लकडाउनका समयमा मैले मैले नयाँ अपार्टमेन्ट किनें, त्यसैले मैले मेरो इएमआईको बारेमा सोच्नु पर्ने भएकाले समस्या हुनसक्छ । यस्तै समस्या रह्यो भने मैले अपार्टमेन्टको किस्ता कसरी तिर्ने ?
आफुले यसरी सामान्य रुपमा भनेको कुरालाई समाचारमा गलत ब्याख्या गरिएको भन्दै उनले खण्डन गरेका छन् । मैले सामान्यतया भनेको थिएँ कि मेरा ५ लाख ईएमआईका लागि क’टौ’ती गरियो र मसँग अझै १५ हजार बाँकी छ। तर यसको मतलब यो होइन कि म टा’ट प’ल्टि’ए र मसँग पैसा बाँकी छैन।
उनले दुई दशक भन्दा बढी काम गरेको मानिस कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । आदित्यले ठट्टा गर्दै भने, मलाई थाहा छैन मेरो बारेमा यस्ता कुरा सुनेर मेरो हुनेवाला ससुरालीहरूले के सोचिरहेको होलान् । अब म विवाह मा धेरै उपहार छैन।